Horohoron-tany mahery no namely an'i Bali, nahafaty olona 3 ary naratra 7
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny Indonezia » Horohoron-tany mahery no namely an'i Bali, nahafaty olona 3 ary naratra 7
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Indonezia • Vaovao • People • Resorts • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Horohoron-tany mahery no namely an'i Bali, nahafaty olona 3 ary naratra 7.
Farafahakeliny olona telo no maty ary fito hafa naratra vokatry ny horohoron-tany tany 'Island of the Gods' any Indonezia.
Horohoron-tany nahatratra 4.8 no namely ny nosy fizahan-tany any Bali, marainan'ny sabotsy teo.
Ny horohorontany dia tsapa indrindra tany amin'ny distrikan'i Karangasem sy Bangli atsinanan'ny nosy.
Ny horohoron-tany tany Bali tany am-piandohana dia narahina horohoron-tany 4.3 maridrefy.
Nisy horohoron-tany nahatratra 4.8 nirohotra Indonezianosy paradisa mpizahatany Bali taloha kelin'ny maraina.
Ny horohorontany dia tsapa indrindra tany amin'ny distrikan'i Karangasem sy Bangli atsinanan'ny nosy, ka nahatonga ny olona handositra ny tranony tamim-panakorontanana.
Ny US Geological Survey dia nametraka ny haben'ny horohoron-tany tany amin'ny 4.8, ary nilaza fa ny ivon-toerany dia 62 kilometatra (38.5 miles) avaratra atsinanan'ny tanàna seranan'i Singaraja no halalinina 10 kilometatra. Ny horohoron-tany voalohany dia narahin'ny horohoron-tany 4.3 lehibe.
Farafahakeliny olona telo no maty ary fito hafa naratra vokatr'ilay horohoron-tany.
Ny roa tamin'ireo maty dia nalevina tao ambanin'ny fihotsahan'ny tany vokatry ny horohoron-tany, ary traboina iray hafa, zazavavy telo taona, no potiky ny potipoti-javatra. Ireo naratra dia voan'ny ratra sy ratra tamin'ny lohany, hoy ny manam-pahefana ao an-toerana, ary mbola nanangona angon-drakitra momba ny maty sy ny famotehana izy ireo.
Bali, izay antsoina matetika hoe 'Island of the Gods', vao nosokafana tamin'ny mpizahatany iraisam-pirenena tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity taorian'ny fe-potoana 18 volana nanakanana ny fiparitahan'ny COVID-19. Na izany aza, ny mpitsidika vahiny dia antenaina ihany ny hanomboka hivezivezy any amin'ny nosy amin'ny volana ambony satria mbola tsy natohy ny sidina iraisam-pirenena mivantana.
Indonezia dia archipelago midadasika, miorina amin'ilay antsoina hoe 'Ring of Fire' - volkano misy volkano sy lalan-diso any amin'ny Ranomasimbe Pasifika - koa ny horohoron-tany sy ny fipoahana dia mahazatra an'ny firenena 270 tapitrisa.
Ny horohoron-tany lehibe farany namely ny firenena tamin'ny Janoary. 6.2 ny haben'ny tanjany ary niteraka fahafatesan'olona 105 farafaharatsiny ary naratra efa ho 6,500 XNUMX.